Ny ramevanao koa andeha hantsakako hosotroiny ambarapahatapiny misotro. Chapitre 9 1 Ary Andriamanitra nitso-drano an’i Noa sy ny zanany hoe; Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany. Ry rahalahiko, avy aiza moa ianareo? La base de données sera enrichie petit-à-petit. Efa hita mihi-tsy fa vadinao izy, ka nahoana no nolazainao hoe: Hataoko maro indrindra ny taranakao, ka tsy ho azo isaina izy noho ny hamaroany.
Chapitre 16 1 [Ny nahaterahan’Isimaela] Ary Saray, vadin’i Abrama, tsy mba niteraka; ary izy nanana mpanompovavy Egyptiana, Hagara no anarany. Angamba efa-polo no ho hita ao. Izaho no Farao, ary raha tsy teninao, dia tsy hisy olona hanetsika ny tànany na ny tongony eto amin’ny tany Egypta rehetra. Besoin d’une licence 0. Amin’ny fotoan’andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao Aho, ary Saraha hanana zazalahy. Bziboly efa hataon’Andriamanitra no asehony amin’i Farao. Satria ren’i Jehovah fa efa nankalahaina aho, dia nomeny ahy koa ity; dia nataony hoe Simeona ny anarany.
Ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko, fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho; izany no nanaovana ny anarany hoe Levy. Dia tezitra indrindra Kaina, sady nanjombona ny tarehiny.
Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Regoela tany amin’ny tany Edoma; ireo no zanak’i Basemata, vadin’i Esao. Ahoana izao nataonao tamiko izao?
Nous utilisons des cookies pour vous offrir un grand app store! Fa ny aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby. Efa nifindra niala teto izy: Chapitre 21 1 [Ny nahaterahan’Isaka, sy ny nandroahana an’i Hagara mianaka] Ary Jehovah namangy an’i Saraha araka ilay efa nolazainy, ary dia nataon’i Jehovah tamin’i Saraha araka ilay efa noteneniny.
Ireo valo ireo no naterak’i Milka tamin’i Nahora, rahalahin’i Abrahama. Efa nivahiny tany amin’i Labana aho ka nitoetra tany mandraka ankehitriny; 6 kkatolika manana omby sy boriky sy ondry aman’osy ary andevolahy aho; dia efa mba naniraka hanambara aminao tompokolahy ihany aho mba hahitako fitia eo imasonao.
Inona no soa ho azontsika, raha hamono ny rahalahintsika sy hanafina ny ràny isika? Satria ren’i Jehovah fa efa nankalahaina aho, dia nomeny ahy koa ity; dia nataony hoe Simeona ny anarany.
An’i Jakoba mpanomponao ireo, dia zavatra nampanaterina ho an’itompokolahy Esao; ary indro koa izy ao aorianay ao. Ary Abela dia mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Ireo rehetra ireo no zanak’i Ketora.
Avia handry amiko; fa navelan’i Josefa teo an-tànany ny akanjony, dia nandositra izy ka nivoaka teny ala-trano. Ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin’ny onin’i Egypta ka hatrany amin’ny ony lehibe, dia ny ony Eofrata, 19 dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita 20 katolik ny Hetita sy ny Perizita sy ny Refaita 21 ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebosita.
Dia hoy izy ireo indray: Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao? Ry Abrahama, ry Abrahama ô! Maroa anaka sy mihabetsaha ary mamenoa ny rano ao amin’ny ranomasina; ary aoka ny vorona hihamaro eny ambonin’ny tany.
Traduction catholique de la Bible Malgache. Jeosy loham-pireneny sy Jalama loham-pireneny sy Kora loham-pireneny. Tsia, fa Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao; ary ny anarany dia hataonao hoe Isaka; ary ny fanekeko haoriko aminy ho biboly mandrakizay ho an’ny taranany mandimby azy. Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao.
Hanisy soa anao tokoa Aho, ka hataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika any an-dranomasina, izay tsy azo isaina noho ny hamaroany. Samy niteraka zazalahy avy izy taorian’ny ldf. Tsia, fa hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Tafahaona tamin’i Esao rahalahinao izahay, ary izy koa dia avy hitsena anao mitondra olona efa-jato lahy.
Aoka hiainga isika, ka handeha hialoha anao katplika. Ny faran’ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin’olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin’ny tany Aho. Miaingà, ento ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto, fandrao mba haringana ianao noho ny heloky ny tanàna.
Inona moa no hevitr’ireny antokony rehetra nifanena tamiko ireny? Indro, nanonofy indray aho; ary, indreo, ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin’ny folo niankohoka teo anatrehako.
Mbola manana ato koa va ianao? Nofiko fa indro, hono, nisy tahom-boaloboka teo katoluka 10 ary ilay tahom-boaloboka nisampana telo, ka nony nitsimoka izy, dia niposaka ny voniny, ary ny sampahony nahavanona voaloboka masaka.
Zanak’i Betoela, zanakalahin’i Nahora, aho, izay naterak’i Milka taminy.